Fursadaha Tabarucayaasha Naadiga Kaabista Buusiyeyaasha | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Naadigu wuxuu ku soo dhaweynayaa waalidiinta xiisaha leh inay wax ka weydiiyaan wax ka mid ah jagooyinka Guddiga ama Guddiga, ama jagooyinka iskaa wax u qabso ee Booster Store. Boos kastaa wuxuu uqaadan karaa qof inuu 'hoos yeesho' ama uu hogaamiyo waqti kasta sanadka. Intaa waxaa dheer, Naadigu wuxuu had iyo jeer raadiyaa tabaruceyaal guddi ah oo ka caawiya mashaariicda gaarka ah ama dhacdooyinka, ama keenista fikrado cusub kulamadayada. Waa hab fiican in lala kulmo waalidiinta kale oo wax laga barto waxa ka dhacaya dugsiga! Fadlan ha ka waaban inaad weydiiso faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan sida aad uga qayb qaadan karto.
Email u dir mhsboostercoordinator@gmail.com wixii macluumaad dheeraad ah.
Mawduucyada Boosaska Booster Xubin Xubin
Madaxweynaha Naadiga Skippers Booster Club wuxuu hogaamiyaa shirarka billaha ah isagoo dejiya ajandaha, wuxuu ilaaliyaa xiriir shaqeynaya oo udhaxeeya Naadiga iyo Xafiiska Waxqabadyada MHS, wuxuu lashaqeeyaa Gudoomiyaha Xiriirka si uu ugu soo bandhigo fariinta ku saabsan Naadiga Boorsooyinka Boostada dhamaan waalidiinta, shaqaalaha iyo xubnaha Naadiga, wuxuu abaabulaa macluumaadka codsiyada maalgelinta guga, wuxuu matalaa Naadiga kulamada macluumaadka ee MHS sida loogu baahdo, waana saxiixa diiwaangashan ee Skippers Booster Club, Inc. koontada hubinta.
Madaxweyne ku xigeenka :
Madaxweyne ku xigeenka Naadiga 'Skippers Booster Club' ayaa hogaamiya shirarka marka uu maqanyahay madaxweynaha, wuxuu qabtaa waajibaadyo iyo xilal kale oo uu u igmaday madaxweynuhu, wuxuu isku waafajiyaa Xisaabta Hay'ada ee Degmadeena inta lagu jiro sanad xisaabeedka wuxuuna kula taliyaa naadiyada isku manhajka ah inay isticmaalaan lacagtaan la siiyay. ka hor May 31.
Waxay haysaa diiwaanka maaliyadeed ee Naadiga. Qofkani wuxuu dhigayaa lacag, wuxuu bixinayaa dhammaan kharashyada, wuxuu hayaa diiwaanada dakhliga iyo kharashyada, wuxuu dheelitirayaa xisaabaadka bangiga wuxuuna la shaqeeyaa CPA diiwaangelinta canshuuraha. Uma baahnid inaad ahaatid xisaabiye. Waqtiga ay ku lug leedahay wuu kala duwan yahay 5‐10 saacadood bishii.
Xoghayuhu wuxuu maareeyaa waraaqaha laxiriira shirarka wuxuuna diraa xasuusinta xiriirka ee taariikhaha iyo goobaha. Xoghayuhu sidoo kale wuxuu qoraal kaqaataa shirarka wuxuuna soo gudbiyaa mudada kulamada si loo duubo.
Guddoomiyaha Xubinnimada :
Waajibaadka koowaad waa in la weyddiisto tabarucaadka xubinnimada iyo in la ilaaliyo macluumaadka xubinta (xaashiyaha 'Excel') ujeeddooyin isgaarsiineed. Iyadoo lala kaashanayo Guddoomiyaha Isgaarsiinta, Guddoomiyaha Xubinnimadu wuxuu abuuraa warqadda xubinnimada, oo la siiyo dugsiga bisha Luulyo si loogu daro xirmada gadaal-dugsiga. Waxyaabaha kale: u dir qoraallada mahadsanid elektiroonig ah, kala shaqee dukaanka websaydhka si aad u siiso awoodda ku-deeqidda xubinnimada khadka tooska ah, suuqa iyo wadista xubinnimada
Guddoomiyaha Isgaarsiinta ayaa mas'uul ka ah dhammaan suuqgeynta Skippers Booster Club iyo isgaarsiinta. Tan waxaa ka mid ah qoritaanka waxyaabaha ku saabsan jimicsiga e-Splash e-newslet, toddobaadlaha ah qoraallada Facebook, xiriirka e-maylka xubnaha iyo tabaruceyaasha, websaydhka iyo waxyaabaha kale ee warbaahinta bulshada. Intaas waxaa sii dheer, Guddoomiyaha Xiriirka wuxuu gacan ka geysanayaa abuurista aaladaha isgaarsiinta suuqgeynta dhacdooyinka gaarka ah, lacag ururiyayaasha, iyo dhiirrigelinta xubinnimada. Ballanqaadku waa qiyaastii 2‐5 saacadood bishii.
Gudoomiyaha lacag uruurinta :
Guddoomiyaha Qaadhaan Uruurintu wuxuu maareeyaa dhammaan dhinacyada xafladaha lacag ururinta. Qofkani wuxuu lashaqeeyaa ganacsiyada iyo alaab-qeybiyeyaasha-saddexaad, wuxuu abaabulaa caawinta ardayda, oo wuxuu maareeyaa dabagalka, meeleynta, iyo fulinta amarada dhammaan munaasabadaha lacag-ururinta ee ka baxsan Booster Store iyo Guddiga Sare ee Xisbiga. Isaga ama iyadu waxay si dhow ulashaqeeyaan Degmadeena munaasabadaha taageerada lamaanaha bulshada. Guddoomiyaha / guddiga Qaadhaan ururinta ayaa sidoo kale u keenaya Guddiga fursadaha iyo fikradaha lacag ururinta waxayna si dhow ula shaqeyn doonaan Madaxweynaha iyo Guddoomiyaha Isgaarsiinta si loo abuuro farriin mideysan iyo agab dhiirrigelin ah.
Guddoomiyaha Xisbiga (Sare):
La soco qorshaha Senior Party, la shaqee gudiyada kala duwan, la kulan Skippers Booster Club Board bilkasta si aad u siiso wixii ku soo kordha horumarka, iyo sidoo kale inaad la kulanto Maamulaha MHS iyo shaqaalaha si loo abuuro qorshaha isgaarsiinta.)
Maamulaha Bakhaarka Kaydinta:
Maareeyuhu waa qofka ugu weyn ee lala xiriiro wixii su'aalo ah wuxuuna mas'uul ka yahay inuu la socdo faahfaahinta maamulka. Maareeyuhu wuxuu shirar bille ah uqabtaa kooxda dukaanka, wuxuu kaqeybqaataa kulamada billaha ah ee Booster Club, wuxuu qoraa cusbooneysiinta dukaanka emaylka usbuuclaha ee Hogaamiyaasha Kooxda, wuxuu ilaaliyaa nidaamka kombuyuutarka dukaanka, nadaafadda iyo agabyada wadaadada. Maareeyuhu wuxuu kaloo tababaro u fidiyaa mutadawiciin cusub Fall wuxuuna cusbooneysiiyaa buuga dukaanka hadba sida loogu baahdo, wuxuu maareeyaa bogga Facebook wuxuuna ka caawiyaa agabka bilaha Julaay / Ogosto.
Waxay haysaa diiwaanka iibka, kaydinta iyo dhibcaha maalinlaha ah, waxay mas'uul ka tahay iibsashada nacnaca waxayna ka soo qaybgashaa shirarka billaha ah ee Booster Store. Waqtiga ballanqaadku wuu kala duwan yahay 5‐15 saacadood usbuucii.
Buster Store Buyers:
Iibsadayaashu waxay mas'uul ka yihiin xulashada dharka iyo agabyada Booster Store. Waxay la shaqeeyaan seddex iibiye waxayna la kulmaan lix jeer sanadkiiba, laba jeer Dayrta Kirismaska, Guga iyo amarro khaas ah, ka dibna dhowr jeer xilliga Guga amarka soo socda ee soo socda ee imanaya bisha Luulyo oo keydsan oo diyaar u ah iibka horraantii Ogosto. Markuu baayacmushtarigu yimaado, iibsadayaashu waxay hubiyaan gudbinta, waxay ku qoraan macluumaadka nidaamka POS, ku calaamadee, isku laabaan, soo bandhigaan oo ku kaydiyaan alaabada hadba sida loogu baahdo. Iibsadayaashu waxay kaloo bixiyaan qolka bakhaarka iyo habeynta abaabulka hadba sida loogu baahdo. Iibsadayaashu waxay maareeyaan qaansheegadka iyo dhibcaha alaabooyinka waxyeelleeyay. La kulan Maareeyaha Bakhaarka iyo xubnaha kale ee Kooxda Dukaanka bil kasta si aad ugala hadasho horumarka dukaanka.
Isuduwaha Dhacdooyinka Gaarka ah:
Isuduwaha Dhacdooyinka Gaarka ah ee Booster Store ayaa mas'uul ka ah dejinta Jadwalka Dhacdooyinka Gaarka ah ee sannadka iyada oo ay talo ka helayaan Guddiga Bakhaarrada Kaydinta. Isuduwaha ayaa sidoo kale mas'uul ka ah jadwalka jadwalka loogu talagalay isbeddelka dhacdooyinka gaarka ah ee ka baxsan saacadaha caadiga ah ee dukaamada. Dhacdooyinka Gaarka ah waxay ka kooban yihiin, laakiin aan ku xaddidnayn, kuwan soo socda: Ku Laabashada Maalinta Dugsiga (shaqaalaha, ardayda, qoysaska cusub), Habeenkii Manhajka, Imaatinka, Shirarka Dayrta & Guga, Hanuuninta Fasalka 8aad iyo iibka Fasaxa / Guga. Wuxuu kaqeyb qaataa bilkasta Kaydinta Kaydinta iyo Kulamada Naadiga.
Maamul bogga waxyaabaha ku jira si kor loogu qaado ka mid noqoshada Booster Club, badeecadaha Kaydinta Kaydinta, wax kasta oo lacag ururiyayaal khadka tooska ah ka shaqeeya, Lacag ururiyeyaal Xisbi Sare iyo diiwaangelinta khadka tooska ah. Maareynta waxaa ka mid ah sameynta bogag cusub, cusbooneysiinta bogagga jira, soo dejinta sawirro, iyo qaar ka mid ah koodhadhka HTML ee yar yar. U adeegso barta emailka lagala xiriiro weydiimaha xoojinta, iyo sidoo kale xiriiriyaha ka dhexeeya Naadiga Booster iyo bixiyahayaga hadda (RevTrak.)
Isuduwaha Tabaruca ee Skippers Booster Store & Club wuxuu hayaa liistada / kalandarka (oo ay ku jiraan macluumaadka xiriirka, emayllada / lambarrada taleefannada) kooxaha Booster Store. Isu-duwaha wuxuu u diraa dhammaan e-mayl macluumaad si mutadawiciin ah iyo sidoo kale codsiyo ah inuu buuxiyo Dhacdooyinka Gaarka ah ee Dhacdooyinka. Isuduwaha wuxuu sidoo kale u diraa dhammaan xusuusiyeyaasha kooxda usbuuc walba dhamaan hogaamiyaasha kooxda. Isuduwaha Iskaa wax u qabso wuxuu noqdaa qofka ugu weyn ee lala soo xiriiro email ahaan wixii weydiimo ah ee ku saabsan iskaa wax u qabso Booster Store iyo Club. Celceliska culeyska shaqadu waa 1-2 saacadood oo shaqo ah oo internetka ah (kombiyuutar) ah usbuucii inta lagu jiro sanad dugsiyeedka oo dhan, iyo 8-12 saacadood usbuucii laga bilaabo Juun ilaa dhammaadka Ogos ee abaabulka kooxaha ka hor sannad-dugsiyeedka cusub, iyo u gudbinta macluumaadka ku saabsan tababarka taariikho / macluumaad.
Ku soo biir Naadiga!
Xubnaha / Liiska Deeqaha
Skippers buusterka Club /